Ny Sand Executive Executive Sandals Resorts dia notolorana Mpitarika tanora amin'ny lokan'ny Travel Pacesetter
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny Sand Executive Executive Sandals Resorts dia notolorana Mpitarika tanora amin'ny lokan'ny Travel Pacesetter
Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • Resorts • Tourism • malaza ankehitriny
Adam Stewart dia nomem-boninahitra noho ny fametrahana ohatra iray amin'ny fahombiazan'ny indostrian'ny dia
Adam Stewart, Filohan'ny Executive Sandals Resorts International (SRI), orinasan-tsoratry ny karazan-tsarimihetsika malaza any Karaiba Sandals Resorts and Beaches Resorts, dia nanaiky ny loka 2021 "Pacesetter" tamin'ny zoma, tao amin'ny Young Leaders in Travel Council tao Jamaika. Travel Allies Society, mpampiantrano ny hetsika, dia manolotra an'ity mari-pankasitrahana isan-taona ity ho an'ireo tanora mpandeha amin'ny lalana izay manao laharam-pahamehana ny fahamendrehana sy ny fanoloran-tena amin'ireo olona tarihiny sy tompoiny, raha mitarika ny hafa hanao toy izany koa.
Stewart dia talen'ny lefitry ny SRI nandritra ny folo taona mahery, izay nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ny marika Sandals Resorts International.
Izy no nitarika ny fifindran'ny marika tamin'ny sonian'ny Luxury Included® ankehitriny ary nampiditra ny trano honenana voalohany ambonin'ny rano.
Stewart koa dia filoham-pirenenan'ilay orinasa mpanao asa soa, The Sandals Foundation.
Tao amin'ny nosy nahalehibe azy, niatrika mpanatrika tanora mpitarika mitovy hevitra aminy sy matihanina amin'ny dia lavitra, Stewart dia nieritreritra ny zavatra niainany manokana lasa mpitarika, ary koa ny an'ny rainy efa nodimandry, Mpanorina ny SRI Gordon "Butch" Stewart, izay niteraka sy nanome aingam-panahy ny fahalehibeazana teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany nandritra ny androm-piainany. "Misaotra anao tamin'ity fotoana ity mba hahatsiarovako sy hizaranao aminao anio izay nitondrako ny soroka teo am-pahatongavana ary handinika ireo lesona amin'ny fitarihana ny làlan-kalehako manokana izay nampianatra ahy ary mbola hampianatra ahy hatrany," hoy ny Filohan'ny Executive.
Talohan'ny niakarany ho mpitarika ankehitriny, Stewart dia niasa ho lefitra lefitra nandritra ny folo taona mahery, ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny marika Sandals Resorts International dia tsy misy farany. Nanara-maso vanim-potoana fanitarana lehibe izy; ao anatin'izany ny trano fialan-tsasatra telo any Jamaika sy Turks ary Caicos, fahefatra ho avy tsy ho ela any St. Vincent sy Grenadines, ary koa Resort Sandals dimy ambin'ny folo any Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, ary Grenada, miaraka amin'ny fahenina ambin'ny folo izay vao nanambara fa hisokatra ao Curacao amin'ny volana aprily 2022. Nanafoana ny fifindran'ny marika ho an'ny sonia Luxury Included® ankehitriny izy ary nanolotra ny toerana voalohany hipetrahan'ny rano. Stewart koa dia filoham-pirenenan'ilay orinasa mpanao asa soa, The Sandals Foundation, fikambanana tsy mitady fanampiana izay manohana ny sekoly, hopitaly ary fianakaviana sahirana, manatanteraka ny fampanantenany hanome valiny ho an'ny fiarahamonina Karaiba.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny marika nahazo ny loka Sandals Resorts International dia tsidiho kapa.com ary torapasika.com .
Momba ny Sandals Resorts International
Sandals Resorts International (SRI) dia orinasa mitana ny marika hita be indrindra amin'ny dia toy ny Sandals® Resorts, Beaches® Resorts, Grand Pineapple Beach Resort, Fowl Cay Resort ary Your Jamaican Villas. Niorina tamin'ny taona 1981, avy amin'i Gordon "Butch" Stewart, nodimandry, ny SRI dia miorina ao Montego Bay, Jamaika ary tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny toeram-pialofana, ny fenitry ny serivisy, ny fampiofanana momba ny fahaiza-manao ary ny fiasa isan'andro. Raha mila fanazavana fanampiny, fitsidihana Sandals Resorts International.
Momba ny Sandals Foundation
Ny Sandals Foundation dia sandan'ny fiantrana an'ny Sandals Resorts International (SRI), orinasam-pandraharahana an'ny fianakaviana any Karaiba. Ny fikambanana 501 (c) (3) tsy mitady tombontsoa dia noforonina hanohizana sy hanitarana ny asa soa natolotry ny Sandals Resorts International hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 1981 mba hanana anjara toerana lehibe amin'ny fiainan'ireo vondrom-piarahamonina iasan'ny SRI manerana an'i Karaiba. . Ny Sandals Foundation dia mamatsy tetikasa amin'ny sehatra telo lehibe: fanabeazana, fiarahamonina ary tontolo iainana. Ny zato isan-jaton'ny vola natolotry ny sarambabem-bahoaka ao amin'ny Sandals Foundation dia mandeha mivantana amin'ireo fandaharanasa mahasoa ny vondrom-piarahamonina Karaiba. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Sandals Foundation dia tsidiho ny Internet sandfoundation.org .
Momba ny Fikambanana Travel Allies
Ny Travel ALLIES Society, dia vondron'olona voafantina izay mitarika masoivoho mpandehandeha, miaraka amin'ny iraka hanohanana ireo mpitarika hafa ao amin'ny indostria. Izy ireo dia manolo-tena amin'ny orinasa miasa amin'ny fahamendrehana ary manaja ireo mpivarotra sy mpiara-miasa aminy am-panajana. Ny fiaraha-monina dia mikendry ny hifanohana amin'ny fiaraha-miasa tokana rehefa manandratra ny fitarihana sy miara-mandroso ny indostrian'ny dia izy ireo. Ny mpikambana ALLIES dia mametraka ny laharam-pahamehana amin'ny fianarana, fiaraha-miasa ary fizarana fomba fanao tsara indrindra.
Dan Pimental Management hoy:
September 22, 2021 ao amin'ny 09: 59
Salama, fampahalalana tena lehibe ity lahatsoratra ity. Mianatra bebe kokoa aho. Tena nankafiziko ny famakiana ity lahatsoratra ity ampy hikarohana ny fanoratana an'ity lahatsoratra tsara ity sy ny lahatsoratra mahasoa misaotra tamin'ny fizarana.